ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် High Power Wide-bandwidth 850nm SLED Diode - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Broadband SLED လေဆာရောင်ခြည် > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT သည်စွမ်းအင်သုံး Wide-bandwidth 850nm SLED Diode
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ OCT အတွက် High Power Wide-bandwidth 850nm SLED Diode ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးပါမည်။
Medical OCT အတွက် 850nm SLED Diode ၏ High Power Wide-bandwidth ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
ဤသည်လေဆာရောင်ခြည် diode မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ application များအတွက်အသုံးပြုတဲ့ single-mode ကို fiber-optic superluminescent အလင်းထုတ်လွှတ် diode (SLED) module အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်း module ကိုအဖြစ် module တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသင့်သော submount အပေါ်တိကျတဲ့ chip ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။
Medical OCT အတွက် 850nm SLED Diode ၏စွမ်းအင်မြင့် Wide-bandwidth ကို ၂
850nm high power SLED၊
14PIN Dual-In-Line (DIL) နှင့် Butterfly အထုပ်များကိုအအေးခံ;
ပြင်ပမော်နီတာ photodiode နှင့်အတူ;
FC အသင်း / APC Connector ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT အတွက် High Power Wide-bandwidth 850nm SLED Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
မျက်စိရောဂါ & ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT;
Fiber optic gyroscopes;
Fiber optic current sensing ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT အတွက် 850nm SLED Diode မြင့်မားသောပါဝါ Wide-bandwidth ကို 4. Optical-Electrical လက္ခဏာများ
operating current IF0- 140 mA
SMF ရှိစွမ်းအား PO35 - mW
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ 830 850 870 nm
bandwidth FWHM - 40 50 - nm
ရောင်စဉ်တန်းဂယက်ထ [RB = 0.1nm] - - 0.1 0.2 dB
Diode Current ကို Monitor IMPD 50 200 (**) - A
PD ဘက်လိုက်မှုဗို့အား Monitor Vb0- -10 V
ပါဝါဟောင်းရှုထောင့် PO915 - mW
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ OCT အတွက် 850nm SLED Diode အမြင့်ပါဝါ Wide-bandwidth ကို ၅. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ OCT အတွက် 850nm SLED Diode ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် High Power Wide-bandwidth ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း